အတိုချုပ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဆေးရွက်ကြီးမှီခိုခြင်း၏လက္ခဏာများလူငယ် - ၂ လေ့လာမှု (၂၀၀၇) - နီကိုတင်းမှီဝဲမှုအားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
လူငယ်-2 လေ့လာမှု (2007) တွင်နီကိုတင်းမူတည်၏အကျဉ်းချုပ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းတတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အကဲဖြတ်ပြီးနောက်ဆေးရွက်ကြီးမူတည်၏လက္ခဏာများ
ယောသပ်သည် R. DiFranza, MD; Judith A. အ Savageau, MPH; ကက်နက်ဖလက်ချာ, Ph.D; et al ဂျနီဖာ O'Loughlin, Ph.D; ရီ Pbert, Ph.D; Judith K. Ockene, Ph.D; အမ်းဃ McNeill, Ph.D; ဂျနီဖာ Hazelton, BA ဘွဲ့; ကရင် Friedman, BA ဘွဲ့; Gretchen Dussault, BA ဘွဲ့; Connie Wood က, MSW; ရောဘတ်ဂျေ Wellman, Ph.D
စာရေးသူ Affiliate အပိုဒ်သတင်းအချက်အလက်
Arch ကလေးမြီးကောင်ပေါက် Med ။ 2007; 161 (7): 704-710 ။ Doi: 10.1001 / archpedi.161.7.704
ရည်ရွယ်ချက် ဆေးရွက်ကြီးမှီခိုနှင့်နီကိုတင်းစားသုံးမှု၏တစ်ဦးထဲကဓာတုပစ်စညျးအတိုင်းအတာအဘို့အအဖြေရှာတဲ့စံ အသုံးပြု. လူငယ်လေ့လာမှုမှာနီကိုတင်းမူတည်၏ပထမဦးဆုံးဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အကဲဖြတ်များ၏တွေ့ရှိချက်များတိုးချဲ့ရန်။ ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုမှီခိုလက္ခဏာတွေလေ့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဆေးလိပ်သောက်စတင်ခြင်းပြီးနောက်မကြာမီပေါ်ထွန်းသောတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ပုံစံ တစ်ဦးက4နှစ်အလားအလာလေ့လာမှု။
setting ကို6မက်ဆာချူးဆက်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ပြည်သူ့ကျောင်းများတွင်။
သင်တန်းသားများကို 1246 ဆဋ္ဌမတန်းကျောင်းသားတစ်ဦးကဆောင်များတွင်။
ကြားဝင် က Eleven အင်တာဗျူးများ။
အဓိကရလဒ်ဆောင်ရွက်ချက်များ နီကိုတင်းစာရင်းပေါ်ချိတ်ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်ဆေးရွက်ကြီးကျော်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးမှီခို၏ဆုံးရှုံးမှုအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအဖြစ် ရောဂါ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေး, 10th တည်းဖြတ်မူ (ICD-10).
ရလဒ်များ အဆိုပါ 217 မွှန်များထဲတွင် 127 10%2ရက်အတွင်းပြုတော်မူပြီးမှနှင့် 25% စီးကရက်ကနေဓာတ်များကိုပထမဦးဆုံး၏ 30 ရက်အတွင်းပြုတော်မူပြီးမှ, သူတို့ရဲ့ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုကိုကျော်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ; ထက်ဝက်သူတို့တစ်လလျှင်7စီးကရက်ဆေးလိပ်ခဲ့ကြသည်အချိန်မှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရလေသည်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးသူ 83 မွှန်တွေထဲမှာ ICD-10မှီခို -defined တဝက်သူတို့တစ်လလျှင် 46 စီးကရက်ဆေးလိပ်ခဲ့ကြသည်အချိန်မှာဒါပြုမိခဲ့သည်။ စတင်ခြင်းအောက်ပါအင်တာဗျူးမှာ ICD-10-defined မှီခိုလက်ရှိဆေးလိပ်သောက်၏ပျမ်းမျှတံထွေး cotinine အာရုံစူးစိုက်မှု 5.35 ng / mL, ကောင်းစွာ passive ဆေးလိပ်သောက်သူများထံမှတက်ကြွခွဲခြားရန်အသုံးပြုသော cutoff အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျရောက်မယ့်အဆင့်အထိဖြစ်ခဲ့သည်။
နိဂုံး အများဆုံးဖြစ်ပေါ်နိုင်လူငယ်များသည်ပထမဦးဆုံးစီးကရက်ကနေဓာတ်များ၏တစ်ရက်သို့မဟုတ်2အတွင်းဆေးရွက်ကြီးကျော်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံး။ ဆေးရွက်ကြီးဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ၏အသွင်အပြင်နှင့်ရပ်နားခြင်းမှာကြိုးစားမှုနေ့စဉ်ဆေးလိပ်သောက်အရင်အဦးနေရာနိုင်ပါတယ်ပျက်ကွက်; ICD-10-defined မှီခိုနေ့စဉ်ဆေးလိပ်သောက်အရင်အဦးနေရာနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်စားသုံးမှုတစ်နေ့လျှင်2စီးကရက်မရောက်ခင်ပုံပေါ်နိုင်ပါတယ်။
မိမိအများစွာကိုအရေးကြီးသောပံ့ပိုးမှုများကို, စယ်တွေထဲမှာ1-430 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထက်ပိုမိုထုတ်ဝေသြဇာစာစီစာကုံးတစ်စီးရီးထဲမှာ "ဆေးလိပ်သောက်အပြုအမူမော်ဒယ်" ဖော်ပြထား။ ဒီ model များတွင်ဆေးလိပ်သောက်နှင့်အတူကနဦးလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များနှင့်သိချင်စိတ်နေဖြင့်လှုံ့ဆော်နေသည်, ဒါပေမယ့် "အလိုလိုကျလှနျးခွငျး", "သက်သာစေသောဆေး," သို့မဟုတ် "ဆွ" ဆေးလိပ်သောက်၏ပုံစံအတွက်နီကိုတင်း၏လျင်မြန်စွာသည် "pharmacological ဆုလာဘ်" ကြိုတင်မှီခိုရန်အသုံးပြုမှုများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုပေး ။ စယ်၏အဆိုအရ "ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဆေးလိပ်သောက်၏3သို့မဟုတ်4နှစ်ပေါင်းပြီးနောက်ပုံမှန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-type အမျိုးအစားမှီခိုဆေးလိပ်သောက်အတွက်သတ်မှတ်။ "3 "ဟုသူကဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမရှိဘဲမိနစ် 20 မှ 20 သွားပြီအခါတိုင်းဆေးလိပ်သောက်အတွေ့အကြုံများဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေ။ " စားသုံးမှုတစ်နေ့လျှင် 30 စီးကရက်, "စွဲလမ်းဆေးလိပ်သောက်" အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့်ထက်ကျော်လွန်သည့်အခါ3 နီကိုတင်းမှီခို၏သဘာဝသမိုင်း၏ဤဂန္ဖော်ပြချက်သာမရှိသလောက်စိန်ခေါ်ခဲ့သည်5 အဆိုပါ 20th ရာစုအကုန်မှတဆင့်။
စယ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းသောက်သည်ပထမဦးဆုံးစီးကရက်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုအတွက်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်: "ဒါဟာလုံးဝနီးပါးနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းပုံမှန်မှီခိုဆေးလိပ်သောက်ဖို့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုသေချာစေရန်ဒီအထိခိုက်မခံကာလ၌အဘယ်သူမျှမကပိုထက်သုံးလေးပေါ့ပေါ့စီးကရက်ကြာပါတယ်။ "3,6 ဆေးလိပ်လူမှုစံစဉ်အခါခေတ်မှာတော့စယ် "သာတစ်ဦးထက်ပိုစီးကရက်ရှိသည်သောသူတို့၏အမျိုးအရာခိုင်နှုန်း 15 အကြောင်းကိုပုံမှန်ဆေးလိပ်သောက်ဖြစ်လာရှောင်ကြဉ်ပါ။ " အဲဒီဖော်ပြထား3 ရံဖန်ရံခါနှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူဆေးလိပ်သောက်အမှန်တကယ် nondependent ခဲ့သည်သူ၏အခိုင်အမာပေးထား,7 အနည်းငယ်စီးကရက်ဆေးလိပ်သူမှပမာဏမှာတူညီသည့်ထိုကဲ့သို့သောလေးနက်တဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, ရှိခဲ့ပါတယ်ဘယ်ကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘယ်တော့မှခဲ့သည် "ဟု 40 နှစ်ဝါကျ။ "7
ပုံမှန်မိုးသည်းထန်စွာဆေးလိပ်သောက်တဲ့နှောင်းပိုင်းတွင် sequela အဖြစ်မှီခိုဖော်ပြအဆိုပါမော်ဒယ်နီကိုတင်းမှီခို၏သဘာဝသမိုင်း၏ပထမဆုံးအလားအလာလေ့လာမှုထုတ်ဝေရန်နှင့်အတူ 2000 အတွက်စိန်ခေါ်ခဲ့သည်။8 လူငယ် (DANDY) လေ့လာမှုမှာနီကိုတင်းမူတည်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အကဲဖြတ်မှီခိုလက္ခဏာတွေစီးကရက်များ၏အရေအတွက်မျှမနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်သောက်သည်သို့မဟုတ်အသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်းသို့မဟုတ်ကြာချိန်နှင့်အတူပထမဦးဆုံးစီးကရက်ပြီးနောက်မကြာမီဖွံ့ဖြိုးကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။8,9 ဆန်းစစ်သည့် 11 မှီခိုလက္ခဏာတွေတစ်ခုချင်းစီကိုလစဉ်ဆေးလိပ်သောက်စတင်များ 1 ရက်သတ္တပတ်အတွင်းကအနည်းဆုံး2လူငယ်များကသတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ လက္ခဏာစတင်ခြင်းမှာအသုံးပြုမှုများ၏ပျမ်းမျှအကြိမ်ရေ4တစ်လလျှင်ရက်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်, ထိုပျမ်းမျှအရေအတွက်တစ်လလျှင် 8 စီးကရက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဒေတာကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဆေးလိပ်သောက်၏စတင်ပြီးနောက်ချက်ချင်းတင်ပြရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ Poisson ကွေးဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
nondaily ဆေးလိပ်သောက်သူများအကြားဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ: အဆိုပါ DANDY လေ့လာမှုအခြားမျှော်လင့်မထားတဲ့တွေ့ရှိချက်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ သမားရိုးကျဉာဏျပညာ, ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေနေ့စဉ်ဆေးလိပ်သောက်၏အလယ်အလတ်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူသာပေါ်ထွန်းသောကြောင့်ကျင်းပ3 နှင့်၎င်းတို့၏ရှေ့မှောက်တွင်တစ်ဦးချင်းတစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံးအား5စီးကရက်ကြာသောခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်နီကိုတင်း၏စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခြင်း, ထိန်းသိမ်းရန်ကြောင်းလိုအပ်သည်။10- 12
ကြောင်းဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသရုပ်ပြပုံတူကူးယူခြင်းနှင့် DANDY လေ့လာမှုတိုးချဲ့ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေအတွက်နီကိုတင်းမူတည်ကွိဘက်, ကနေဒါအတွက် (NDIT) လေ့လာမှုနေ့စဉ်ဆေးလိပ်သောက်စတင်ခြင်းမပြုမီပေါ်လာနိုင်ပါတယ်13 နှင့် ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာစာရင်းအင်းအမျိုးအစားခွဲခြား, 10th တည်းဖြတ်မူ (ICD-10), ဆေးရွက်ကြီးမှီခိုဘို့အဖြေရှာတဲ့စံပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုစဉ်အတွင်းပေါ်လာပါသည်။13,14 ရှင်သန်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ပထမဦးဆုံး puff ကနေတိုင်းတာအသုံးပြုခြင်းသည် NDIT လေ့လာမှုအားလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း၏ 25% 1.5 လအတွင်းအခြားဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေမှ, မှ, 4.5 လအတွင်းခြင်းဖြင့်လစဉ်ဆေးလိပ်သောက်ရန်, 8.8 လအတွင်းအားဖြင့်တဏှာရန်, 11 လအတွင်းအားဖြင့်ရှူရှိုက်မိပါမှချီတက်ခဲ့သောကြောင်းအစီရင်ခံ အပတ်စဉ် 19.4 လအတွင်းအားဖြင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း, ရန် ICD-103 လအတွင်းအားဖြင့်မှီခို (40.6 စံ၏ရှေ့မှောက်တွင်) -defined ။15 သူတို့တစ်ဦးချင်းစီဖြစ်ရပ်အောက်ပါစစ်တမ်း၏နေ့စွဲအပေါ်အခြေခံထားတယ်အဖြစ်ဤအခန့်မှန်းချက်, စစ်မှန်တဲ့ latency overstate ။ ပထမဦးဆုံးမွှန် (3 လအောင်းနေချိန်) နှင့်ပထမဦးဆုံးတဏှာ (1.5 လအတွင်း) အကြား 4.5 လအတွင်းစဉ်အတွင်းသေးလစဉ်ဆေးလိပ်သောက်မဟုတ်ကြတဲ့သူလူငယ်များသည်3စီးကရက် (လစဉ်ဆေးလိပ်သောက်ဖို့အောင်းနေချိန် 8.8 လစေ့သတည်း) ထက်နည်းပါးလာသောက်သည်။ အဆိုပါ NDIT ဒေတာဆယ်ကျော်သက်များအတွက်သာ 1 သို့မဟုတ်2စီးကရက်မီးခိုးဓာတ်များ၏အသုံးအများဆုံးလက္ခဏာတဏှာသွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်ကြောင်းအကြံပြု ICD-10မှီခို -defined ။
DANDY နှင့် NDIT လေ့လာမှုများမှရရှိသောအချက်အလက်များသည်စယ်၏မော်ဒယ်ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ ဤအချက်အလက်များမှဆင်းသက်လာသည်။ sensitization-homeostasis သီအိုရီကနီကိုတင်းမှီခိုမှုအပေါ်အခြေခံသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များကိုပထမဆုံးစီးကရက်ကလည်ပတ်စေသည်ဟုဆိုသည်။16 ဇီဝကမ္မမောင်းနှင်တဏှာနှင့်ဆုတ်ခွာသက်သာရာတစ်ခုချင်းစီကိုတစ်လသာအနည်းငယ်စီးကရက်ဆေးလိပ်သောသူတို့အဘို့အဓိကစေ့ဆော်မှုဖြစ်လာသည်။ အစပိုင်းမှာတဏှာနှင့်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေအပတ်တိုင်းသို့မဟုတ်ဒါ 1 စီးကရက်ဆေးလိပ်အားဖြင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာသိုထားနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သည်းခံစိတ်တည်ဆောက်အဖြစ်, တစ်ဦးချင်းစီစီးကရက်ပေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများ၏ကြာချိန်တဖြည်းဖြည်း shortens ။ အဆိုပါဆေးလိပ်သောက်စားသုံးမှုထိန်းချုပ်မပါဘူးဆိုရင်စယ်လေ့လာတွေ့ရှိအဖြစ် "ဟုသူက [သို့မဟုတ်သူမက], ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမရှိဘဲ 20 မိနစ် 30 သွားပြီအခါတိုင်းဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ" သူသို့မဟုတ်သူမတွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။3
ထို့ကြောင့်စာပေမှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏2မော်ဒယ်များဖျော်ဖြေ။ လူငယ်-2 (DANDY-2) လေ့လာမှုမှာနီကိုတင်းမူတည်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်တဏှာ, ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်နီကိုတင်းမှီခို၏အခြားရောဂါလက္ခဏာတွေကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဆေးလိပ်သောက်၏ကာလအတွင်းပေါ်လာလျှင်အဆုံးအဖြတ်အားဖြင့်ထိခိုက်လွယ်သော-homeostasis သီအိုရီကိုစမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်တယ် နေ့စဉ်ဆေးလိပ်သောက် precedes ။ အဆိုပါ DANDY-2 လေ့လာမှုအကဲဖြတ်, နီကိုတင်းစားသုံးမှု၏တစ်ဦးထဲကဓာတုပစ်စညျးအတိုင်းအတာအလုပ်သမားဖြင့်၎င်း၏နောင်တော်အပေါ်တိုးတက်လာ ICD-10ရှင်သန်မှုနီကိုတင်း၏ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစီရင်ခံတင်ပြရှူရှိုက်မိပါကနေအောင်းနေချိန်တိုင်း, လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း, 45 အလားအလာဆေးလိပ်သောက်အန္တရာယ်အချက်များများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသုံးပြီး, ဆေးရွက်ကြီးမှီခို -defined ။
ဒါဟာဆဋ္ဌမတန်းကျောင်းသားတစ်ဦးဆောင်များတွင်တစ်ဦး4နှစ် longitudinal လေ့လာမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အားလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးတက္ကသိုလ်မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်၏ Medical School ကျောင်းတွင်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ဒေသခံကျောင်းကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
ဘာသာရပ်များမြို့ပြနှင့်ဆင်ခြေဖုံးမက်ဆာချူးဆက်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ဦးလူမျိုးရေးအရနှင့်လူမျိုးစုကွဲပြားခြားနားနမူနာများကိုရွေးချယ်ထားသည့်6အတွက်ကျောင်းများအနေဖြင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကျောင်းများမှတဆင့်လူသိရှင်ကြားခဲ့သည်။ အကြောင်းကြားခွင့်ပြုချက်ဘာသာရပ်နှင့်သူ၏သို့မဟုတ်သူမ၏မိဘများ၏တဦးတည်းထံမှရရှိသောခဲ့သည်။ အဆိုပါသာသီးခြားသတ်မှတ်ထားအင်္ဂလိပ်လိုဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ကျောင်းသားများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်တခုတခုအပေါ်မှာနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ (ဆေးလိပ် status ကိုအရည်အချင်းပြည့်မီဆုံးဖြတ်ရန်ခဲ့ပါဘူး။ ) သစ်ကိုကျောင်းကတစ် 1 နာရီ drive ကိုအတွင်းကြီးသစ်ကိုကျောင်းကဝန်ခံလျှင်ကျောင်းများပြောင်းလဲသွားတယ်တဲ့သူဘာသာရပ်များထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလ 2002 ကနေဇန်နဝါရီလ 2006, ပုဂ္ဂလိက3မှနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလျှို့ဝှက်, မျက်နှာ-to-မျက်နှာ, scripted အင်တာဗျူးများဒေတာစုဆောင်းခြင်း၏ 11 လှိုင်းတံပိုး၏တစ်ဦးစုစုပေါင်းများအတွက်ကျောင်းများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်နှင့်အတူကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အင်တာဗျူးရက်စွဲများနှင့်ဖြစ်ရပ်များများ၏တိကျမှန်ကန်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။17,18 ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်ရပ်များ၏တစ်ဦးကပြက္ခဒိန်လက္ခဏာနှင့်ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုသမိုင်းမှတ်တိုင်များ၏အချိန်ကိုက်နှင့် sequence ကိုတည်ထောင်ရန်တစ်ဦးချင်းစီဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုသူများအတွက်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းမှတ်တိုင်များကိုပထမဦးဆုံး puff ပါဝင်သည်; ပထမဦးဆုံးအမွှန်; , လစဉ်အပတ်စဉ်နှင့်နေ့စဉ်ဆေးလိပ်သောက်စတင်ခြင်း; နီကိုတင်းစာရင်းပေါ်ချိတ် (HONC) ရက်နေ့တွင်ပစ္စည်းများကို၏ထောက်ခံချက်, နှင့်များ၏ပွညျ့စုံ ICD-10 ဆေးရွက်ကြီးမှီခိုဘို့စံ။ သမိုင်းမှတ်တိုင်များများအတွက်တိကျသောရက်စွဲများတဲ့အခါမှာရရှိနိုင်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ မှတ်တိုင်တစ်ခုလရဲ့အစမှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်လျှင်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်က 7th အပေါ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ပြီးလျှင်အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်, အလယ်၌, 15th သကဲ့သို့, နှင့် 25th အဖြစ်လကုန်မှာ။ အတိုဆုံးအစီရင်ခံဖော်ပြထားအောင်းနေချိန်ကြိမ်ဘက်လိုက်မှုမှတ်မိဖို့အနည်းဆုံးဘာသာရပ်ခဲ့ကြသည်။ ဖြစ်ရပ်များတွင်ကျယ်ကျယ် space ခဲ့ကြသည်လျှင်, ဘာသာရပ်လွတ်လပ်စွာ2ရက်စွဲများမှတ်မိခဲ့ရသည်။ ဖြစ်ရပ်များထိုနေ့ပေါ်တွင်သို့မဟုတ် sequential ရက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်လျှင်သို့သော်, ဒုတိယဖြစ်ရပ်၏နေ့စွဲကိုပထမဦးဆုံးဖြစ်ရပ်ကြောင့်မှကာလ၏သင့်တော်တဲ့နံပါတ်ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်တွက်ချက်ခဲ့သည်။
ပထမဆုံးအကြိမ်ရှူရှိုက်မိခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောတုံ့ပြန်မှုများကိုထိုဖြစ်ရပ်ပြီးနောက်ချက်ချင်းပင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ လူ ဦး ရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပထမ ဦး ဆုံးအင်တာဗျူးတွင်ကောက်ယူခဲ့သည် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတစ်ခုစီတွင်အသုံးပြုသောဆေးရွက်ကြီးအမျိုးအစားများနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာသာရပ်၏မှတ်တမ်းကိုနောက်ဆုံးပေါ်တင်ခဲ့သည်။ ကြာချိန်၊ ကြိမ်နှုန်းနှင့်အသုံးပြုမှုပမာဏ၊ နှင့် abstinence ၏ကာလ။
တံတွေးနမူနာရှေ့ 30 ရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်းမည်သည့်ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့တဲ့သူဘာသာရပ်များအနေဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီအင်တာဗျူးမှာစုဆောင်းနှင့်စီးကရက်အရေအတွက်ကိုယခင်3ရက်ပေါင်းမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်စဉ်အတွင်းသောက်သည်ခဲ့ကြသည်။ Cotinine, နီကိုတင်း၏ metabolite, 17 နာရီတစ်ဝက်ဘဝရှိပြီးပြီးခဲ့သည့်စီးကရက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်းများစွာတံတွေးထဲမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။19,20 တစ်တံတွေးနမူနာများကိုငြင်းပယ်သောဘာသာရပ်များလေ့လာမှုမှာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ တံတွေးနမူနာ, centrifuged -20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာအေးခဲနှင့်ဓာတ်ငွေ့-အရည် Chromatography သုံးပြီးမျက်စိကန်း cotinine အရေအတွက်တစ်ခုလွတ်လပ်သောဓာတ်ခွဲခန်းမှခြောက်သွေ့သောရေခဲပေါ်တင်ပို့ခဲ့ကြသည်။21
ရလဒ်ကိုအစီအမံနီကိုတင်းနှင့်တစ်ခုကျော်လျော့နည်းသွားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပါဝင်သည် ICD-10နီကိုတင်းမှီခို၏ရောဂါ -defined ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုများ၏ sequelae, ဖြတ်ဖို့အတားအဆီးကိုတင်ပြသည့်အခါအပြည့်အဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။22 က Eleven ပစ္စည်းများကိုပထမဦးဆုံး DANDY လေ့လာမှုမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အကဲဖြတ်ရန်ရန်အသုံးပြုကြသည် ဟူ. ၎င်း, ဤအရာ 10 (ထို HONC composeစားပွဲတင် 1).22 အဆိုပါ HONC မြီးကောင်ပေါက်များ၏ 0.90 လေ့လာမှုများအတွက် 0.94 မှ4တစ် Cronbach αအတူတစ်ပြိုင်တည်းပါနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တရားဝင်မှု, ကောင်းသောစမ်းသပ်မှု-retest ယုံကြည်စိတ်ချရ, တစ်တည်ငြိမ် Single-အချက်ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြည်တွင်းရေးယုံကြည်စိတ်ချရသရုပ်ပြခဲ့သည်။22- 29 အခုတော့ 12 ဘာသာစကားများကိုအသုံးပြုသည် HONC ပိုပြီးနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နီကိုတင်းမှီခို၏အခြားမည်သည့်အတိုင်းအတာထက်မြီးကောင်ပေါက်နှင့်အတူအကဲဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။23
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးမူတည်၏ Diagnosis ၏ဆုံးရှုံးမှုအကဲဖြတ်ဖို့အသုံးပြုအင်တာဗျူးမေးခွန်းများ
ပထမဦးဆုံး HONC လက္ခဏာများ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့်တကွ, ဆေးလိပ်သောက်အပြည့်အဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ပထမဦးဆုံး HONC လက္ခဏာ၏အချိန်မှာတစ်ခုချင်းစီ HONC လက္ခဏာ၏စတင်ခြင်း၏နေ့စွဲနှင့်ကြိမ်နှုန်း (28 ရက်ကြာတစ်လလျှင်ရက်ပေါင်း) နှင့်ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှု (တစ်လလျှင်စီးကရက်) ၏ငွေပမာဏကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ မှိန်ဖျော့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်များ၏ပြင်းထန်မှုထောက်ခံ HONC ပစ္စည်းများ (0-10) ၏စုပေါင်းအရေအတွက်ကိုကဉျြးခြုပျအားဖွငျ့တွက်ချက်ခဲ့သည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးမှုဆေးလိပ်သောက်တိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်, ကျနော်တို့χကိုအသုံးပြု2 အဘယ်သူမျှမ HONC ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ 1 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလက္ခဏာတွေရှိခဲ့တဲ့သူတွေကိုသူဘာသာရပ်များအကြားတွင်နေ့စဉ်ဆေးလိပ်သောက်နှိုင်းယှဉ်ဖို့စမ်းသပ်။ ဤအဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်လူဦးရေသီးခြားစီတစ်စီးကရက်အပေါ်မာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်ဖူးသောသူအပေါင်းတို့သည်ဘာသာရပ်များ, ရှိုက်ခဲ့သူများဖြစ်ကြသည်။
ကျနော်တို့အနေနဲ့တည်ထောင်ရန်တစ် 22-item ကိုအင်တာဗျူးကိုအသုံးပြု ICD-10ဆေးရွက်ကြီးမှီခို၏ -defined ရောဂါ;3သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလက္ခဏာတွေတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုဘို့လိုအပ်သည် (စားပွဲတင် 1).14 အခါကျနော်တို့နေ့စွဲမှတျတမျးတငျထား ICD-10 စံပထမဦးဆုံးအဲဒီအခြိနျမှာမှီနှင့်ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုအဆင့်ခဲ့ကြသည်။
လူငယ်အချို့၏ထက်ဝက်ထက်နည်းပါးလာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးစီးကရက်ကနေရှူ။30 မှီခိုလက္ခဏာတွေမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုမရှိခြင်းအတွက်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေအဖြစ်ကျနော်တို့ဓာတ်များကိုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲသမိုင်းမှတ်တိုင်များ၏နေ့စွဲကနေရှူရှိုက်မိ၏နေ့စွဲနုတ်အားဖြင့် latency (2 ဖြစ်ရပ်များအကြားကာလ၏နံပါတ်) တွက်ချက်တဲ့သူဘာသာရပ်များမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကန့်သတ်။
ကြိုတင်ဓာတ်များကိုမှလစဉ်အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြသူ6ဘာသာရပ်များအဘို့, လစဉ်ဆေးလိပ်သောက်ဖို့အောင်းနေချိန်၏တွက်ချက်မှုအနှုတ်အရေအတွက်ကထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဤအ6ဘာသာရပ်များအဘို့, ပထမဦးဆုံးမွှန်၏နေ့စွဲလစဉ်ဆေးလိပ်သောက်စတင်ခြင်း၏နေ့စွဲအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ နှစျခုဘာသာရပ်များ puffing ပြီးနောက်ပေမယ့်မွှန်၏အစီရင်ခံတင်ပြသည့်ရက်စွဲမတိုင်မီ HONC ရောဂါလက္ခဏာတွေကဖော်ပြခဲ့သည်; ဒီလည်းအနုတ်လက္ခဏာအချိန်ယူနစ်နှင့်အတူအောင်းနေချိန်တန်ဖိုးများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အစီရင်ခံထက်ယူဆချက်တွင်နီကိုတင်းထိတွေ့အစောပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်း, ဓာတ်များကိုအဘို့အရက်စွဲဖြင့်အောင်းနေချိန်၏စမ်းသပ်မှုအနေဖြင့်ထိုအ2ဘာသာရပ်များဖယ်ထုတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ နီကိုတင်းထိတွေ့မှုပထမဦးဆုံးမွှန်ရှေ့ပြေးအဖြစ်ဓာတ်များကိုမရောက်မီမှန်မှန်ဝါးဆေးရွက်ကြီးကိုသုံးခဲ့သောတစ်ခုတည်းသောဘာသာရပ်, အောင်းနေချိန်၏စမ်းသပ်မှုကနေကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
ကြောင့်အသက်, လူမျိုး, လိင်, ဇီဝြဖစ်, နှင့်စီးကရက်သောက်သည်သောလမ်း (puff နှင့် puff ပမာဏ၏ဥပမာနံပါတ်) အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဖို့ကတစ်ဦးချင်းစီအဆင့်မှာသောက်သည်စီးကရက်သို့ cotinine အဆင့်ကိုဘာသာပြန်ဆိုမဖြစ်နိုင်ပါ။31 အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် cotinine အဆင့်ဆင့် (အလင်းထဲကမိုးသည်းထန်စွာဆေးလိပ်သောက်ဖို့အကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးစီးကရက်စားသုံးမှုနှင့်အတူတစ်ဦး nonlinear အသင်းအဖွဲ့ကိုပြသr = 0.44) သို့သော်ပြီးခဲ့သည့် ၁၇ နာရီအတွင်းစားသုံးမှုသည်စီးကရက် ၁၀ ခုထက်နည်းလျှင်ညီမျှသောဆက်စပ်မှုကိုပြပါ (r = 0.53) ။31 McNeill et al32 ပျမ်းမျှတစ်လလျှင်ပျမ်းမျှစီးကရက် ၂၁၀ သောက်သောဆယ်ကျော်သက်များအကြားပျမ်းမျှတံတွေး cotinine ပမာဏသည် 201 ng / mL ဖြစ်သည်။ ဤကြမ်းတမ်းသောစာပေးစာယူကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိန်းဂဏန်းများတွင်ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံတင်ပြသောစားသုံးမှု (တစ်လလျှင်စီးကရက်) နှင့် cotinine အဆင့်များကိုဖော်ပြရန် x-axis intervals များကိုအသုံးပြုရန်အဆင်ပြေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် curves ပုံစံများကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ cotinine ပမာဏသည်တစ်လလျှင်ဆေးလိပ်သောက်သောစီးကရက်နှင့်ညီမျှကြောင်းညွှန်ပြအဖြစ်လွဲမှားစွာအနက်
တစ်ဦးက Kaplan-Meier ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကောင့်သို့ထိတွေ့မှု၏အရှည်တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှု (ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှု) ယူပြီးစီမှတ်တိုင်သို့ရောက်ရှိ၏စုပေါင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။15 ဘာသာရပ်များကိုပထမဦးဆုံးရှူရှိုက်မိပါကနေမှီခိုစတင်ခြင်းများအတွက်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ယူဆခဲ့ကြသည်။ သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအင်တာဗျူးသည်အထိဆေးလိပ်သောက်ဆက်လက်သူကိုဘာသာရပ်များသူတို့သေးအကျိုးစီးပွားရလဒ်ကိုအောင်မြင်မဟုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြောင်းအင်တာဗျူးရက်စွဲမှာဆင်ဆာခံရဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ ဆေးလိပ်ရပ်စဲနှင့်၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးအင်တာဗျူး (ရုပ်သိမ်းရေးလက္ခဏာတွေပေါ်ပေါက်လာဘို့အချိန်ခွင့်ပြု) သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးစီးကရက်ပြီးနောက် 30 ရက်ပေါင်းဆင်ဆာခံရဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြမတိုင်မီပြန်လည်စတင်ရန်ခဲ့ပါဘူး။ သူကိုဘာသာရပ်များ
1246 ကျောင်းသား 1808 ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်း (68.9%) ဆဋ္ဌမတန်းအတွက်စာရင်းသွင်းလေ့လာမှုများအတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်း။ ဤအရာ, 77.8% (970) ဒေတာစုဆောင်း 11 လှိုင်းတံပိုးမှတဆင့်ထိန်းသိမ်းထားကြသည် ဟူ. ၎င်း, 208 ဘာသာရပ်များဝေးသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ နမူနာ 51.9 ပထမဦးဆုံးအင်တာဗျူးမှာ 12.2 နှစ်ပေါင်း (အကွာအဝေး, 11-14 နှစ်) ၏တစ်ဦးယုတ်အသက်အရွယ်နှင့်အတူ% အမျိုးသမီးခဲ့သည်။ အဆိုပါလူဦးရေ 70.2, 18.4% လူမည်း 5.0% အာရှနှင့် 3.7% အမေရိကန်အင်ဒီးယန်း, 2.7% ဟစ်စပန်းနစ်% အဖြူဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်သက်တာဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုအတွက်ပေးထား စားပွဲတင် 2; ဘာသာရပ်များသာ 1.1% အခြေခံမှာယခင် 30 နေ့ရက်ကာလ၌ဆေးလိပ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ စီးကရက်အပေါ်မာနထောင်လွှားသူ 370 ဘာသာရပ်များပထမဦးဆုံး puff (အကွာအဝေး, 11.7-2.5; SD, 16.7 နှစ်) မှာ 3.0 နှစ်ပေါင်းပျမ်းမျှအသက်ခဲ့ခြင်းနှင့် 217 မွှန် 12.8 နှစ်ပေါင်းပထမဦးဆုံးမွှန် (အကွာအဝေး, 2.5-17.1 မှာပျမ်းမျှအသက်ခဲ့ ; SD, 2.6 နှစ်) ။ ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းများ၏အာရုံစူးစိုက်နေသော 217 မွှန်၏, 127 (58.5%) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့် 83 (38.2%) တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုး ICD-10မှီခို -defined ။
ဒေတာ Poisson ဖြန့်ဝေခဲ့သည့်အခါရာခိုင်နှုန်းနှင့်ပျမ်းမျှအစီရင်ခံသည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးသွားသောအခါဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအကြိမ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်တစ်လလျှင် ၁ ရက်ဖြစ်သည် (n = ၁၀၆; ပျမ်းမျှ၊ တစ်လလျှင် ၅.၅ ရက်၊ နှုန်း - ၀ မှ ၂၈ ရက်); ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှုအနေဖြင့်တစ်လလျှင်စီးကရက် ၁ ခု (ပျမ်းမျှ ၇ စီးကရက်၊ အကွာအဝေး ၀၅ မှ ၅၆၀ စီးကရက်) အထိရှိသည်။ ပထမ ဦး ဆုံး HONC လက္ခဏာပြပြီးနောက်အင်တာဗျူးတွင် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသောတံတွေး cotinine အဆင့်သည် 25 ng / mL ဖြစ်သည် (n = 1; median, 106 ng / mL; range, 5.5-0 ng / mL) ။
ပုံ 1 ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောအခါထိုအချိန်က Self-အစီရင်ခံဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုနှင့် cotinine အဆင့်ဆင့်နှိုင်းယှဉ်။ တံတွေးငြင်းဆန်ခဲ့သည်သို့မဟုတ်ယခင် 30 နေ့ရက်ကာလ၌သောက်သည်မဟုတ်ခဲ့သောဘာသာရပ်များအနေဖြင့်ကောက်ယူမခံခဲ့ရပါဘူး။ ထို့ကြောင့် cotinine ဒေတာဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုကိုဒေတာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်ဘယ်သူကိုများအတွက်ဘာသာရပ်များ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်အပေါ်အခြေခံထားတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးခါးဆစ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးမှုအဓိကအားနီကိုတင်းစားသုံးမှု၏နိမ့်ဆုံးအဆင့်မှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကဖော်ပြသည်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးမှုတွင် cotinine တန်ဖိုးများနှင့်ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံသောဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှုရာခိုင်နှုန်းကိုဖြန့်ဝေသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများစတင်ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်အင်တာဗျူးတွင်ဘာသာရပ်များသည် cotinine ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်တံတွေးနမူနာကိုပေးခဲ့ပြီးသူတို့ပထမ ဦး ဆုံးလက္ခဏာလက္ခဏာတွေ့ခဲ့သည့်အခါသူတို့၏စီးကရက်စားသုံးမှုသည်အဘယ်အရာဖြစ်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ တံထွေး cotinine အဆင့်အဘို့, x- ဝင်ရိုး millilititer နှုန်း nanograms အတွက် cotinine အာရုံစူးစိုက်မှုကိုကိုယ်စားပြု (n = 62); ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှုအတွက် ၂၈ ရက်တစ်ရက်လျှင်စီးကရက်ကိုကိုယ်စားပြုသည် (n = ၁၀၆) ။ cotinine ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်နမူနာအရွယ်အစားသည်ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှုထက်သေးငယ်သည်၊ အကြောင်းမှာဆေးလိပ်ဖြတ်သူသို့မဟုတ်နမူနာယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တောင်းဆိုမှုကိုငြင်းဆန်ပါကတံတွေးမစုဆောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
စတင်ခြင်းမှာအသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်းများအတွက် 25th ရာခိုင်နှုန်း ICD-10- သတ်မှတ်ထားသောမှီခိုမှုသည် ၂၈ ရက်တစ်ရက်လျှင် ၈ ရက်ဖြစ်သည် (n = 8; ပျမ်းမျှ၊ ၂၈ ရက်၊ အကွာအဝေး၊ ၀ မှ ၂၈ ရက်); ဆေးလိပ်သောက်သောစီးကရက်အရေအတွက်မှာတစ်လလျှင်စီးကရက် ၈ စီး (ပျမ်းမျှစီးကရက် ၄၆ စီး၊ အကွာအဝေး၊ ၀၅-၅၆ စီးကရက်) ဖြစ်သည်။ အောက်ပါအင်တာဗျူးမှာ 28 ရာခိုင်နှုန်းရာခိုင်နှုန်းတံတွေး cotinine အဆင့် ICD-10-defined မှီခို 0.4 ng / mL (; ပျမ်းမျှ, 54 ng / mL range = 5.35; အကွာအဝေး, 0.0-211.4 ng / mL) ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပုံ2စတင်ခြင်းမှာ display ကိုနှစ်ဦးစလုံး Self-အစီရင်ခံစားသုံးမှုနှင့် cotinine အဆင့်ဆင့် ICD-10မှီခို -defined ။ အဆိုပါ cotinine ဒေတာစတင်ခြင်းမှာစားသုံးမှုနိမ့်ဆုံးပြင်းထန်မှုမှာဘာသာရပ်များတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအာရုံစူးစိုက်မှုပြသ ICD-10မှီခို -defined ။
စတင်ခြင်းမှာ cotinine တန်ဖိုးများနှင့် Self-အစီရင်ခံစီးကရက်စားသုံးမှုရာခိုင်နှုန်းဖြန့်ဖြူး ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာစာရင်းအင်းအမျိုးအစားခွဲခြား, 10th တည်းဖြတ်မူ (ICD-10)မှီခို -defined ။ ရောဂါလက္ခဏာတွေစတင်ခြင်းအောက်ပါအင်တာဗျူးမှာဘာသာရပ်များ cotinine ပြဌာန်းခွင့်များအတွက်တံတွေးနမူနာပေးအပ်ကြပြီးပထမဦးဆုံးအများအတွက်စံတွေ့သောအခါသူတို့၏စီးကရက်စားသုံးမှုခဲ့သောအရာကိုအစီရင်ခံတင်ပြ ICD-10-defined မှီခို။ တံထွေး cotinine အဆင့်အဘို့, x- ဝင်ရိုး millilititer နှုန်း nanograms အတွက် cotinine အာရုံစူးစိုက်မှုကိုကိုယ်စားပြု (= = 54); စီးကရက်သုံးစွဲမှုအတွက် ၂၈ ရက်တစ်ရက်လျှင်စီးကရက်ကိုကိုယ်စားပြုသည် (n = 28) ။ cotinine ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်နမူနာအရွယ်အစားသည်ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှုထက်သေးငယ်သည်၊ အကြောင်းမှာဆေးလိပ်ဖြတ်သူသို့မဟုတ်နမူနာယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တောင်းဆိုမှုကိုငြင်းဆန်ပါကတံတွေးမစုဆောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
စားပွဲတင်3အဆိုပါ 10 HONC လက္ခဏာတွေတစ်ခုချင်းစီ၏ဖြစ်ပွားမှုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့မကြာခဏတစ်ခုချင်းစီကိုကြိုတင်နေ့စဉ်ဆေးလိပ်သောက်စတင်ခြင်းတို့အားထင်ရှားလေ၏။ ဒေတာ၏ဒုတိယကော်လံများကညွှန်ပြသည့်အတိုင်းသူတို့နေ့စဉ်ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ချီတက်ခဲ့မတိုင်မီတိုင်းမှတ်တိုင်အချို့ဘာသာရပ်များအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူဘာသာရပ်များ၏ 70.1% အတွက်နေ့စဉ်ဆေးလိပ်သောက်ရှေ့ပြေး; ICD-10နေ့စဉ်ဆေးလိပ်မသောက်မီကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောမှီခိုမှုသည်အချိန်၏ ၃၈.၆% ရှိသည်။ ရှူရှိုက်မိခြင်းမှရှူရှိုက်မိခြင်းမှကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးမှုအထိ ၁၀ နှင့် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၂ နှင့် ၃၀ အသီးသီး (n = 38.6; range, 10-25 days) နှင့်မရှူမိခြင်းမှသည်စတင်ခြင်းအထိဖြစ်သည်။ ICD-10မှီခိုအားထားမှုအရ၎င်းတို့သည် ၆၁ ရက်နှင့် ၁၃၉ ရက်ဖြစ်သည် (n = 61; range, 139-81 days) အသီးသီးဖြစ်သည်။ မှီခိုခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးခြင်း (သို့) HONC လက္ခဏာ ၁၀ ခုအနက်မှသိသာသောလိင်ကွဲပြားမှုများမရှိပါ။
စီးကရက်ကိုမာန်တက်စေသောဘာသာရပ်များအကြား၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးမှုကိုနေ့စဉ်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ (၁၉၅.၈) ၏အလေးသာမှုအချိုး (195.8% ယုံကြည်မှုကြားကာလ၊ ၆၂-၆၁၄; အပြုသဘောဆောင်သောခန့်မှန်းတန်ဖိုး = ၀.၇၁; အနုတ်လက္ခဏာကြိုတင်ခန့်မှန်းတန်ဖိုး = 95) ။ ရှူရှိုက်မိသူများအနက်အလေးသာမှုအချိုးမှာ ၈၃.၄ (၉၅% ယုံကြည်မှုကြားကာလ၊ ၂၆-၂၆၅; အပြုသဘောဆောင်သောခန့်မှန်းတန်ဖိုး = ၀.၇၄; အနုတ်လက္ခဏာတန်ဖိုး = ၀.၉၇) ။
ဆေးရွက်ကြီးကျော်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူဘာသာရပ်များဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အစီးကရက်ကနေဓာတ်များ၏2ရက်အတွင်းပြုခဲ့သည်။ တစ်ဝက်သူတို့တစ်လလျှင်7စီးကရက်ဆေးလိပ်ခဲ့ကြသည်အချိန်မှာဒါပြုမိခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောသူတို့၏အမျိုးအထက်ဝက်သူတို့တစ်လလျှင် 8 စီးကရက်ဆေးလိပ်ခဲ့ကြသည်အချိန်မှာဒါပြုသမျှသောပထမဦးဆုံး DANDY လေ့လာမှုနှင့်အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါတယ်။ များအတွက်စံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသောသူတို့၏အမျိုးအဝက် ICD-10-defined မှီခိုသူတို့တစ်နေ့လျှင် 1 စီးကရက်မှ2ဆေးလိပ်ခဲ့ကြသည်အချိန်မှာဒါပြုမိခဲ့သည်။ အဆိုပါထဲကဓာတုပစ်စညျး assay စတင်ခြင်းမှာဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးအလွန်နိမ့်အဆင့်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည် ICD-10မှီခို -defined; အဆိုပါပျမ်းမျှတံထွေး cotinine အဆင့် (5.35 ng / mL) passive ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့်အောင်မြင်အကွာအဝေးအတွင်းကျဆင်း33 နှင့် passive ဆေးလိပ်သောက်သူများထံမှဆေးလိပ်သောက်ကွဲပြားခြားနားသွားဘို့လည်းအကြံပြု cutoff အမှတ် (15 ng / mL) ကိုအောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။20 ရှုထောင့်, McNeill et al အတွက် cotinine data တွေကိုနေရာ32 တစ်ပတ်ကို 1 စီးကရက်ထက်လျော့နည်းသောက်သည်တဲ့သူလူငယ်များသည် 13.1 ng / mL တစ်ယုတ်တံထွေး cotinine အဆင့်အထိရှိခဲ့တယ်နှင့်တစ်ပတ်လျှင် 1 စီးကရက်မှ6သောက်သည်သောသူတို့အား 26.1 ng / mL တစ်အတောအတွင်းအဆင့်အထိရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာနေ့ကိုတစ်လျှောက်လုံးအသှေးကိုအဆင့်ဆင့်ရေရှည်တည်တံ့ဖို့လုံလောက်သောတစ်ဦးနီကိုတင်းစားသုံးမှုမှီခိုအစပျိုးရန်လိုအပ်ကြောင်းသီအိုရီချေပ။
ကသတ်မှတ်အဖြစ်ဆေးရွက်ကြီးမှီခို ICD-10 ပထမဦးဆုံးမွှန်ပြီးနောက် 13 ရက်ပေါင်းအဖြစ်အစောပိုင်းအဖြစ်ရောဂါနှင့်အတော်ကြာဘာသာရပ်များပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အဓာတ်များပြီးနောက်နေ့ကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဆေးလိပ်သောက်၏စတင်များရက်အတွင်းမှီခိုလက္ခဏာတွေ၏အသွင်အပြင်အတွက် အသုံးပြု. ပထမဆုံး DANDY အစီရင်ခံခဲ့ပြီးယခု (ထို NDIT လေ့လာမှုကအတည်ပြုခဲ့ပြီး ICD-10 ရောဂါရှာဖွေစံ), လက်ရှိလေ့လာမှုအသုံးပြုပုံအသုံးပြုဖို့အနေနဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလေ့လာမှုအားဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် (စတုတ္ထ Edition ကို) စံ။13,15,34
စယ်1-4ပထမဦးဆုံးစီးကရက်၏အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍအသိအမှတ်ပြုအတွက်မှန်ကန်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာတချို့လူငယ်များသည်ပထမဦးဆုံးမွှန်၏တစ်ရက်အတွင်းဆေးရွက်ကြီးမှီခို၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုခံစားရကြောင်းညွှန်ပြသကဲ့သို့, ပထမဦးဆုံးမွှန်အရေးကြီးဆုံးဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်ယုံကြည်ပါတယ်။ တဏှာနှင့်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေလေ့ကျနော်တို့ယခင်ကအစီရင်ခံသည်အတိုင်းတစ်ခုတည်းစီးကရက်ဆေးလိပ်နေ့ရက်များစွာအဘို့အစိတ်သက်သာရာရနိုင်, ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောဆေးလိပ်နှင့်အတူပေါ်လာပါ။35 ဆေးရွက်ကြီးကျော်ဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးမညျ့သူမြား၏ထက်ဝက်သူတို့တစ်လလျှင်7သို့မဟုတ် 8 စီးကရက်ဆေးလိပ်နေသောအချိန်အားဖြင့်ဒါပွုပါပွီ။ ထိခိုက်လွယ်-homeostasis သီအိုရီတွင်ဖော်ပြထားသောအဖြစ် DANDY လေ့လာမှုများနှင့် NDIT လေ့လာမှုနှစ်ခုလုံးအနေဖြင့်အဆိုပါဒေတာ, နီကိုတင်းမှီခို၏သဘာဝသမိုင်းရဲ့ဖော်ပြချက်နှင့်အတူလုံးဝကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။15,16
ပထမဦးဆုံးရှူရှိုက်မိပါကနေပထမဦးဆုံးလက္ခဏာဖို့အချိန်၏စည်းကမ်းချက်များ၌စတင်ခြင်း၏အမြန်နှုန်းကိုတိုင်းတာမှီခိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွံ့ဖြိုးသောမှားယွင်းသောအထင်အမြင်ပေးနိုင်ပါသည်။ နှစ်ဦးကလူငယ်အချို့3ရက်ပေါင်းနှင့်အခြား3နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးအောင်းနေချိန်ရှိခြင်းတစ်ဦးနှင့်အတူသူတို့၏ဒုတိယစီးကရက်ကနေဓာတ်များကိုအပြီးနေ့ကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးနိုင်ဘူး။ ပထမဦးဆုံးစီးကရက်များ၏အကွာမှာရှိတဲ့အစွန်းရောက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ (ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် 0-3898 ရက်) လေ့လာ latency အတွက်ကြီးမားသောအကွာအဝေးစေတယ်။ ကျနော်တို့မှီခိုအနေနဲ့အကောင်းဆုံးထိုးအချိန်ဇယားတစ်ခုအောက်တွင်မရွေးရသေးလူငယ်လူဦးရေအတွက်သွေးဆောင်နိုင်ပုံကိုလျင်မြန်စွာမသိရပါဘူး။ မှီခိုစတင်ခြင်းဖော်ပြတဲ့အခါ, ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှု၏အစီအမံအသုံးပြုမှုကြာချိန်ထက်လွဲမှားစွာအနက်မှလျော့နည်းကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
နီကိုတင်းဆေးသောက်ခြင်း၏လက္ခဏာများသည်နေ့စဉ်ဆေးလိပ်မသောက်မီအချို့သောဘာသာရပ်များတွင်ဖြစ်သည်။ စီးကရက် ၁ စီးကရက်သောက်ခြင်းသည်နီကိုတင်းဓာတ်ငွေ့၏ ၂ နာရီဝက်ဘဝ၏ပြင်းအားအစဉ်အလာအားဖြင့်ကုန်လွန်သွားသောအချိန်ကာလများအတွက်ဆေးလိပ်ဖြတ်သူများနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမှသက်သာရာရစေလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုထင်ရနိုင်သည်။35,36 သို့သော်စီးကရက်ပေါ်တွင် ၁ မှ ၂ ခေါက်မှရရှိသောနီကိုတင်းသည် ဦး နှောက်၏နီကိုတင်းဓာတ်လက်ခံစက်များ၏ ၅၀% ကိုသိမ်းပိုက်လိမ့်မည်။37 နှင့်နီကိုတင်း၏တစ်ခုတည်းထိုးကအနည်းဆုံးတစ်လများအတွက် hippocampus အတွက် noradrenaline ပေါင်းစပ်နှင့် (သူတို့ကိုဆွတဲ့အနိမ့်ခုံမှာလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအလားအလာကိုထမ်းရွက်ဖို့ခွင့်ပြု) အာရုံခံ၏ကြာရှည်အလားအလာနှစ်ဦးစလုံးတိုးပွားစေပါသည်။38,39 လက်ရှိလေ့လာမှု,4longitudinal အပါအဝင်8,13,28 အများအပြား Cross-Section လေ့လာမှုများ5,35,40- 43 nondaily ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေကဖော်ပြခဲ့သည်ပါပြီ။
ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနဲ့ passive ဆေးလိပ်သောက်အတူတူပင်ယုတ်တံထွေး cotinine အဆင့်ဆင့်ထုတ်လုပ်နိုငျသျောလညျးသီအိုရီအတွက်တက်ကြွစွာဆေးလိပ်သောက်ဦးနှောက်နီကိုတင်းအဆင့်ဆင့်အဆင့်မြင့် spikes ထုတ်လုပ်သင့်ပါတယ်။ passive မီးခိုးထိတွေ့မှီခိုများ၏အန္တရာယ်တိုးလာလျှင်, ငါတို့သည်ဆေးလိပ်သောက်မိဘများ, မောင်နှမ, ဒါမှမဟုတ်ရွယ်တူချင်းထိတွေ့သူတွေထဲမှာဒီမြင်ကြပြီမယ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကမအမှုကိုပြု၏။44
ဤလေ့လာမှု၏အားသာချက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်2ရလဒ်ကိုအစီအမံ (အရှုံး၎င်း၏အသုံးပြုမှုဖြစ်ကြပြီး ICD-10ဆေးလိပ်သောက်၏ -defined မှီခို),2အစီအမံ (ဆေးလိပ်သောက်ကြိမ်နှုန်းနှင့်ကြာချိန်), ထိတွေ့မှု၏2အစီအမံ (Self-အစီရင်ခံစာနှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျး assay), နီးကပ်စွာလှပတဲ့အလားအလာဒေတာစုဆောင်းခြင်း၏ 11 လှိုင်းတံပိုးများအတွက်အင်တာဗျူးများ; ယင်း၏4နှစ်နောက်ဆက်တွဲ; အမှန်တကယ်ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုအတွက်ရက်စွဲများနှင့်ရလဒ်ကိုအတိုင်းအတာထက် data တွေကိုစုစည်း၏နေ့စွဲ၎င်း၏စုဆောင်းမှု, ရှင်သန်မှု၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုရပ်စဲပြီးနောက် censoring နှင့်အတူလေ့လာဆန်းစစ်; နှင့်ယခင်အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူ၎င်း၏ကိုက်ညီမှု။
လေ့လာမှု၏ကန့်သတ်ချက်များမှာအချက်အလက်ကောက်ယူခြင်းသည်လုံးဝအလားအလာမရှိကြောင်း၊ ဒေတာဘက်လိုက်မှုမှတ်မိဖို့ဘာသာရပ်ပါ၏ မှီခိုမှုတိုင်းကိုကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံတင်ပြသည်။ နှင့်အပျိုဖော်ဝင်၊ အရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အခန်းကဏ္consideredကိုမစဉ်းစားခဲ့ကြပါ။ The ICD-10 ယင်း၏စံအကဲဖြတ်ရန်တစ်ဦးအတည်ပြုတူရိယာမပေးပါဘူး။ အဆိုပါ HONC မျက်နှာသာ psychometric သတ္တိလည်းရှိတယ်ဆိုသောကြောင့်, ငါတို့သည်အကဲဖြတ်ရန်ရန်၎င်း၏ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခဲ့ ICD-10 သင့်လျော်သောအဖြစ်စံ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာကိုအခြားလူဦးရေသို့မဟုတ်အသက်အရွယ်အုပ်စုများ၏ကိုယ်စားလှယ်မည်မဟုတ်ပါ။ (အသီးသီး 8 တစ်လလျှင်7ရက်ပေါင်း vs,) သို့သော် (အသီးသီး 4.0 တစ်လလျှင် 5.5 စီးကရက် vs) ယုတ်သောငွေပမာဏ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ပထမဦးဆုံးနှင့်ဒုတိယ DANDY လေ့လာမှုများနီးပါးတူညီရလဒ်များကိုနှင့်ဆေးလိပ်သောက်၏ကြိမ်နှုန်းကိုဆုံးရှုံးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်စတင်ခြင်းမှာ ဤတန်ဖိုးများကိုလူဦးရေကိုဖြတ်ပြီးတည်ငြိမ်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
သမ္မာသတိလူငယ်အချို့ကဆေးရွက်ကြီးအပေါ်တစ်ဦးအသက်တာရှည်မှီခိုအစပျိုးသာ 1 စီးကရက်ယူစေခြင်းငှါသတိပေးခဲ့သည်ရမည်ဟုဆိုထားသည်။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်သဘောထားနှင့်အလေ့အကျင့်စစ်တမ်းများတွင်45 သူတို့ရဲ့တစ်သက်တာအတွက် 20 စီးကရက်ထက်နည်းပါးလာသောက်သည်ခဲ့သူတချို့ဆယ်ကျော်သက်အခက်အခဲဖြတ်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ တစ်လလျှင်သာအနည်းငယ်စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူတောင်မှလူငယ်နားလည်ပြီးတဏှာနှင့်ရုပ်သိမ်းရေးကိုကျော်လွှားရန်အကူအညီများလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာလူဦးရေအနာဂတ်ရပ်နားခြင်းသုတေသန၏အာရုံဖြစ်သင့်သည်။
စာပေးစာယူ: ယောသပ်သည် R. DiFranza, MD, မိသားစုဆေးပညာနှင့်ရပ်ရွာကျန်းမာရေး, မက်ဆာချူးဆက် Medical School ကတက္ကသိုလ်, 55 ရေကန် Ave, Worcester, MA 01655 (ဦးစီးဌာန[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]).
ပြည်သူများအဘို့အလက်ခံခဲ့သည်: ဇန်နဝါရီလ 3, 2007 ။
စာရေးသူထောက်ပံ့: ဒေါက်တာ DiFranza လေ့လာမှုအတွက်အချက်အလက်များ၏လူအပေါင်းတို့အားအပြည့်အဝသုံးစွဲနိုင်ခဲ့များနှင့်ဒေတာများ၏သမာဓိနှင့်ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုများအတွက်တာဝန်ကြာပါသည်။ လေ့လာမှုအယူအဆနှင့်ဒီဇိုင်း: DiFranza, Ockene နှင့် McNeill ။ အချက်အလက်များ၏သိမ်းယူမှု: DiFranza, Hazelton, Friedman, Dussault နှင့် Wood က။ အချက်အလက်များ၏ analysis နှင့်အနက်: DiFranza, Savageau, ဖလက်ချာ, O'Loughlin, Pbert, McNeill နှင့် Wellman ။ လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏မူကြမ်းရေးဆွဲ: DiFranza, Savageau, ဖလက်ချာ, O'Loughlin, Pbert နှင့် Wellman ။ အရေးကြီးသောဉာဏအကြောင်းအရာများအတွက်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဝေဖန်တည်းဖြတ်မူ: DiFranza, Savageau, ဖလက်ချာ, O'Loughlin, Pbert, Ockene, McNeill, Hazelton, Friedman, Dussault, Wood ကများနှင့် Wellman ။ စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: Savageau, ဖလက်ချာနှင့် O'Loughlin ။ ရရှိသောရန်ပုံငွေ: DiFranza နှင့် Ockene ။ , အုပ်ချုပ်ရေးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပစ္စည်းပံ့ပိုးမှု: DiFranza နှင့် Savageau ။ လေ့လာမှုကြီးကြပ်မှု: DiFranza နှင့် Dussault ။
ရန်ပုံငွေရှာခြင်း / ပံ့ပိုးမှု: ဒီလေ့လာမှုကမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုကနေထောက်ပံ့ကြေး RO1 DA14666 ( "နီကိုတင်းမှီခိုဖို့အကူးအပြောင်း") တို့ကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
Russell MA ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအလေ့အထနှင့်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း။ Practitioner 1974;212 (1272) 791- 800PubMed
Russell MA စီးကရက်မှီခိုခြင်းငါ - သဘာဝနှင့်ခွဲခြားခြင်း။ br Med J ကို 1971;2 (5757) 330- 331PubMedဆောင်းပါး
Russell MA စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း - မှီခိုမှုရောဂါ၏သမိုင်းကြောင်း။ br J ကို Med Psychol 1971;44 (1) 1- 16PubMedဆောင်းပါး
Russell MA ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းပြ:နာများ - ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ NIDA Res Monogr 1977; (17) 13- 33PubMed
McNeill အေဒီကလေးများအတွက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအပေါ်မှီခိုမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ br J ကိုစွဲ 1991;86 (5) 589- 592PubMedဆောင်းပါး
McKennell AThomas R ကို အရွယ်ရောက်သူများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအလေ့အကျင့်များနှင့်သဘောထားများ။ လန်ဒန်၊ အင်္ဂလန်သူမ၏ဘုရင်မင်းမြတ်ရုံးခန်းသည် ၁၉၆၇;
Russell MA နီကိုတင်းစွဲခြင်းထောင်ချောက် - စီးကရက်လေးစီးအတွက်နှစ် ၄၀ ပြစ်ဒဏ်။ br J ကိုစွဲ 1990;85 (2) 293- 300PubMedဆောင်းပါး
DiFranza JRSavageau JAFletcher K et al ။ လူငယ်များတွင်ဆေးရွက်ကြီးမှီခိုမှုလက္ခဏာများပေါ်ပေါက်လာခြင်း - DANDY လေ့လာမှုမှလ ၃၀ နောက်ဆက်တွဲအချက်အလက်များ။ တောဘထိန်းချုပ်ရေး 2002;11 (3) 228- 235PubMedဆောင်းပါး
DiFranza JRRigotti NAMcNeill အေဒီနှင့်အခြားသူများ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌နီကိုတင်းမှီခိုမှု၏ကန ဦး ရောဂါလက္ခဏာများ။ တောဘထိန်းချုပ်ရေး 2000;9 (3) 313- 319PubMedဆောင်းပါး
Benowitz NLHenningfield J ကိုစွဲလမ်းမှုအတွက်နီကိုတင်းဓာတ်ပမာဏကိုသတ်မှတ်ခြင်း။ N ကို Engl J ကို Med 1994;331 (2) 123- 125PubMedဆောင်းပါး
Benowitz NL မူးယစ်ဆေးကုထုံး - ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်နီကိုတင်းစွဲခြင်း၏ဆေးဝါးရှုထောင့်။ N ကို Engl J ကို Med 1988;319 (20) 1318- 1330PubMedဆောင်းပါး
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအတွင်းနီကိုတင်း၏နေ့စဉ်စားသုံးမှု Benowitz NLJacob P ။ Clin Pharmacol Ther 1984;35 (4) 499- 504PubMedဆောင်းပါး
O'Loughlin JDiFranza JTyndale RF et al ။ နီကိုတင်းမှီခိုမှုလက္ခဏာများသည်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအကြိမ်ရေနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ နံနက် J ကို Prev Med 2003;25 (3) 219- 225PubMedဆောင်းပါး
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO, ရောဂါ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေး, 10th တည်းဖြတ်မူ (ICD-10) ။ ဂျီနီဗာ, ဆွစ်ဇာလန်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး Organization1992;
Gervais AO'Loughlin JMeshefedjian GBancej CTremblay M မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်စီးကရက်သုံးစွဲခြင်း၏သဘာဝသင်တန်းတွင်မှတ်တိုင်များ။ CMAJ 2006;175 (3) 255- 262PubMedဆောင်းပါး
DiFranza JRWellman RJ နီကိုတင်းတပ်မက်ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်သည်းခံနိုင်ခြင်း၏အာရုံခံစားမှု - homeostasis ပုံစံ - လက်တွေ့နှင့်အခြေခံသိပ္ပံစာပေကိုပေါင်းစပ်သည်။ နီကိုတင်းတောဘ Res 2005;7 (1) 9- 26PubMedဆောင်းပါး
ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိဆိုင်ရာမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်း - စစ်တမ်းများအပေါ်မှတ်ဉာဏ်နှင့်အခြ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ သိပ္ပံ 1987;236 (4798) 157- 161PubMedဆောင်းပါး
Ershler JLeventhal HFleming RGlynn K ဆဌမမှ ၁၂ တန်းအထိဆေးလိပ်သောက်သူများသည်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းအတွေ့အကြုံ။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ 1989;14 (4) 365- 378PubMedဆောင်းပါး
တံတွေးနှင့်ဆေးလိပ်မသောက်သူများ၊ passive ဆေးလိပ်သောက်သူများနှင့်တက်ကြွသောဆေးလိပ်သောက်သူများ၏ဆီးထဲတွင် Wall MAJohnson JJacob PBenowitz NL Cotinine ။ နံနက် J ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေး 1988;78 (6) 699- 701PubMedဆောင်းပါး
ဇီဝဓါတုဗေဒစစ်ဆေးမှုဆပ်ကော်မတီ၊ ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှုနှင့်ဇီဝဓာတုဗေဒစစ်ဆေးခြင်း။ နီကိုတင်းတောဘ Res 2002;4 (2) 149- 159PubMedဆောင်းပါး
Feyerabend CRussell MA ဇီဝအရည်များတွင် cotinine နှင့်နီကိုတင်းဓာတ်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်လျင်မြန်သောဓာတ်ငွေ့ - အရည် chromatographic နည်းလမ်း။ J ကို Pharm Pharmacol 1990;42 (6) 450- 452PubMedဆောင်းပါး
DiFranza JRSavageau JAFletcher K et al ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်နီကိုတင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးမှုကိုတိုင်းတာခြင်း - DANDY (လူငယ်များတွင်နီကိုတင်းမှီခိုမှုဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အကဲဖြတ်) လေ့လာမှု။ Arch ကလေးမြီးကောင်ပေါက် Med 2002;156 (4) 397- 403PubMedဆောင်းပါး
DiFranza JWellman RJ သည်နီကိုတင်းစစ်ဆေးမှုစာရင်း (HONC) တွင်ချိတ်ခဲ့သည်။ http://fmchapps.umassmed.edu/honcဝင်ရောက်မေလ 23, 2006
O'Loughlin JTarasuk JDiFranza JParadis, G ဆယ်ကျော်သက်များအကြားနီကိုတင်းမှီခိုမှု၏ရွေးချယ်ထားသောအစီအမံများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှု။ အမ်း Epidemiol 2002;12 (5) 353- 362PubMedဆောင်းပါး
Wellman RJDiFranza JRPbert L et al ။ နီကိုတင်းစစ်ဆေးမှုစာရင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထားသောFagerströmသည်းခံစိတ်မေးခွန်းလွှာ။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ 2006;31 (3) 486- 495PubMedဆောင်းပါး
Wellman RJDiFranza JRSavageau JADussault GF အစောပိုင်းဆေးလိပ်ဝယ်ယူမှုကာလ။ တောဘထိန်းချုပ်ရေး 2004;13 (3) 251- 257PubMedဆောင်းပါး
Wellman RJDiFranza JRSavageau JAGodiwala SFriedman KHazelton J နီကိုတင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လူကြီးများ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးမှုကိုတိုင်းတာခြင်း - နီကိုတင်းစစ်ဆေးမှုစာရင်းတွင်ချိတ်ထားခြင်း။ နီကိုတင်းတောဘ Res 2005;7 (1) 157- 161PubMedဆောင်းပါး
Wellman RJSavageau JAGodiwala S et al ။ နီကိုတင်းစစ်ဆေးမှုစာရင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အရွယ်ရောက်သူဆေးလိပ်သောက်သူများတွင်နီကိုတင်းမှီခိုမှု၏ Fagerstrom စမ်းသပ်မှုနှိုင်းယှဉ်ချက်။ နီကိုတင်းတောဘ Res 2006;8 (4) 575- 580PubMedဆောင်းပါး
ဝိုင် KCFletcher KEWellman RJDiFranza JR နီကိုတင်းမှီခိုမှုအတွက်ဆယ်ကျော်သက်များကိုစစ်ဆေးခြင်း - နီကိုတင်းစစ်ဆေးမှုစာရင်း J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး 2004;35 (3) 225- 230PubMedဆောင်းပါး
Friedman LS Lichtenstein EBiglan ဆယ်ကျော်သက်များအကြားတွင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းစတင်ခြင်း - ကန ဦး အခြေအနေများအားလက်တွေ့စမ်းသပ်မှု။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ 1985; 101- 13PubMedဆောင်းပါး
Swan GEHabina KMeans BJobe JEsposito J Saliva cotinine နှင့်မကြာသေးမီကဆေးလိပ်သောက်ခြင်း - nonlinear ကြားဆက်ဆံရေးအတွက်အထောက်အထား။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကိုယ်စားလှယ် 1993;108 (6) 779- 783PubMed
မြီးကောင်ပေါက်များ၌စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၏ညွှန်ပြချက်အနေဖြင့်တံတွေး cotinine အဖြစ် McNeill ADJarvis MWest RRussell MBryant ။ br J ကိုစွဲ 1987;82 (12) 1355- 1360PubMedဆောင်းပါး
Etzel RA ဆေးလိပ်မီးခိုးနှင့်ထိတွေ့ခြင်းအမှတ်အသားအဖြစ်တံတွေး cotinine အသုံးပြုမှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ prev Med 1990;19 (2) 190- 197PubMedဆောင်းပါး
Kandel DBHu MCGriesler PCSchaffran C နီကိုတင်းမှီဝဲမှုလက္ခဏာလက္ခဏာများ၏အတွေ့အကြုံအချိန်ကိုက်။ မှာတင်ပြခဲ့သည်စာတမ်း: နီကိုတင်းနှင့်ဆေးရွက်ကြီးအစည်းအဝေးအပေါ်သုတေသနအဖွဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဖေဖော်ဝါရီလ 15-18, 2006 Orlando တွင်, FL
ဖာနန်ဒို WWWellman RDiFranza J စီးကရက်သောက်သုံးမှုအဆင့်နှင့်နောက်ကြောင်းပြန်အစီရင်ခံထားသောရုပ်သိမ်းမှုလက္ခဏာများစတင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုတို့၏ဆက်စပ်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2006;188 (3) 335- 342PubMedဆောင်းပါး
Benowitz NLJacob P လူ၏ဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့်နီကိုတင်း၏နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများတစ် ဦး ချင်းအလိုက်ပြောင်းလဲခြင်း။ J ကို Pharmacol Exp Ther 1982;221 (2) 368- 372PubMed
Brody ALMandelkern MLondon အီး et al ။ စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက ဦး နှောက် alpha-4၊ beta-2 နီကိုတင်း acetylcholine receptors များကိုပြည့်နှက်စေသည်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 2006;63 (8) 907- 915PubMedဆောင်းပါး
Hamid SDawe GSGray JAStephenson JD နီကိုတင်းသည်နီကိုတင်းဖြင့်ကြွက်များ၏သွားဖုံးပြာ gyrus တွင်ကြာရှည်ခံနိုင်သောစွမ်းရည်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ neuroscience Res 1997;29 (1) 81- 85PubMedဆောင်းပါး
Smith KMMitchell SNJoseph MJ ကြွက် ဦး နှောက်အတွင်းရှိ noradrenergic နှင့် dopaminergic အာရုံကြောများရှိ tyrosine hydroxylase လှုပ်ရှားမှုအပေါ်နာတာရှည်နှင့် subchronic nikotine ၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Neurochem 1991;57 (5) 1750- 1756PubMedဆောင်းပါး
Riedel BWRobinson LKlesges RMcLain-Allen B ဆယ်ကျော်သက်များအကြားဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်လူမျိုးရေးကွဲပြားခြားနားမှု။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ 2003;28 (1) 129- 140PubMedဆောင်းပါး
ခိုင်မာသည့် DRKahler CRamsey SAbrantes ABrown R စူးရှသောစိတ်စိတ်ပညာဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားတွင်နီကိုတင်းဆုတ်ခွာခြင်း - item response response ။ နီကိုတင်းတောဘ Res 2004;6 (3) 547- 557PubMedဆောင်းပါး
Wellman RMcMillen RDiFranza J နီကိုတင်းစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းတွင်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုအကဲဖြတ်ခြင်း။ J ကို Am Coll ကနျြးမာရေး စာနယ်ဇင်းများတွင်
McNeill ADWest RJarvis MJackson PBryant ဆယ်ကျော်သက်ဆေးလိပ်သောက်သူများတွင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းလက္ခဏာများ။ Psychopharmacology (Berl) 1986;90 (4) 533- 536PubMedဆောင်းပါး
DiFranza JSavageau JAFletcher K et al ။ နီကိုတင်းမှီခိုမှုအပေါ်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း - လူငယ်များ - ၂ တွင်နီကိုတင်းမှီဝဲမှုဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း။ ကလေးအထူးကု စာနယ်ဇင်းများတွင်
ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစင်တာများ၊ ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲရသည့်အကြောင်းရင်းများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသောဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲသူများအကြားနီကိုတင်းဆေးကြောခြင်းလက္ခဏာများ - ယူနိုက်တက်စတိတ်၊ ၁၉၉၃ ။ MMWR Morb Mortal Wkly ကိုယ်စားလှယ် 1994;43 (41) 745- 750PubMed